Ụbọchị My Pet » Zere ụgha
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 23 2020 | 5 min agụ
Mgbe mbụ m malitere Internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, M bụ ahịa director n'ihi na otu onye nke Milwaukee kasị ukwuu na-ewu sịrị, M gara ụlọ akwụkwọ oge, m na-arụ ọrụ na-ekwusara a n'akwụkwọ abụ uri. Ma, M na-eche, mere bụghị m zutere na ezi onye ma? Ọ dịghị mgbe ọ bịara doo m anya na m crazy, frenetic oge pụrụ ịbụ ihe mere.
M bịakwutere Internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ka ọzọ ọrụ ngo. N'oge na-adịghị m emailing na nzute ọhụrụ ụmụ okorobịa na a nnọọ Ugboro ndabere. N'ezie, Mgbe m matara ha ebe adaba na ngwa ngwa, ụlọ ahịa kọfị dị ka ebe kasị masị m. M nwere ike gbapụta na, ikori ruo otu awa (nke bụ mgbe m onye na-achị) na mgbe ahụ na-na m ụzọ. Ọ bụ nanị ọzọ nzukọ m n'uche enyocha apụ m mgbe-eto eto na ndepụta nke na-eme si.
Na na, mgbe ụfọdụ Ihọd ga gripe n'ihi na m ga-nwere ibughari anyị ụbọchị… na ibughari… na mgbe ahụ mgbe ụfọdụ, ịkagbu. Ma hey, Echere m, ma ọ bụrụ na ọ na-apụghị ịghọta na m na-arụsi ọrụ ike a nwa agbọghọ na a ndụ nke aka m mgbe ahụ, ọ bụghị uru ya nnu. Right?
Ọ bụ mgbe m zutere otu nwoke site email, bụ onye na-ubé tọrọ m, na ụmụaka na a azụmahịa ọ malitere na ndondo emi gbasaa. Ọ dara smart na-akpali ma na-akpali mmasị m ya ozi ịntanetị. N'ikpeazụ ụbọchị mgbe anyị kwetara izute. M ndokwa ụbọchị m kalenda maka izu na-abịa, ma dị ka ụbọchị bịakwutere m ghọtara na e nweghị otú m ga-enwe ike ime ka oge na-akpọ ya ịkagbu. Ọ bụ na-eme amara na anyị nọgidere na-agwa na ekwentị, mgbe ọ bụla m nchegbu ka ya kwụsịrị akara n'ihi na m chere na m ga-enwe oge iji mara ya ozugbo anyị zutere. Anyị ndokwa ọzọ ụbọchị na m nwere ịkagbu na dị ka nke ọma ma na a akpatre minit amaghị ama popped elu m anọghị n'oche m n'ikike nke m enweghị ike na-biko onyeisi.
M na-eme ihere-asị na m rescheduled anyị ụbọchị atọ ọzọ ugboro. Mgbe ahụ n'ikpeazụ, N'ikpeazụ a di na nwunye izu ka e mesịrị m zutere ya nri n'ihu Christmas. M naara ụbọchị ọrụ ma na-aga na 'ịchụkwudo’ na ikpeazụ nkeji na-ede n'akwụkwọ. M kwetara izute ya n'ihi na a ngwa ngwa iko kọfị na m ụzọ na.
Ọ bụ mma na-akpa ọchị na m mmasị ya ozugbo. O wee sị ihe ahụ mere ka m kwụsị m egwu, agịga àmà siri screeching kwụsịrị soundtrack m ndụ iji ọrụ n'aka.
Mgbe m mere a akwụkwọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado na Barnes na nējide onwe na-kwara site na nke a oghere si a fiftiesh redheaded nwaanyị. “Gịnị bụ na ndị ikom niile na-edina online?”. E nwere ihe ụfọdụ na-achị ọchị, na ụfọdụ akụ aka ka ọma. M na ọ bụghị mgbe niile na-idem ajụjụ, n'ihi na ọ bụrụ na m na-ekwu na a ụlọ nke iri abụọ na ise ndị ikom, ha ga doro anya na ịjụ ajụjụ ahụ banyere ụmụ nwanyị.
My kutu azịza ọnọdụ ndị a bụ na-agbali ọmịiko na ndị ụgha na-enweghị ịnabata ha omume. Ka anyị chee echiche: Gịnị mere ndị mmadụ na-edina? 1) N'ihi na ha na obi erughị ala na 2) N'ihi na ha maara na ọ bụrụ na ha na-agwa eziokwu, ha ga-ọbụna inwe ụbọchị. Mara n'ụzọ kwụ ọtọ, nri? Ọ bụghị n'ihi na ndị inyom a na-ege ntị. N'ezie, ọ bụghị nanị na ha na-bristle na atụnyere nwoke ụgha (ọjọọ) ka nwanyi ụgha (bụghị otú ọjọọ), ma ha siri ọnwụ na ọ bụ uncivilized ka nwoke na-arịọ maka nwaanyị ezi afọ.
Listen. Enweghị m ike kwụsị ụgha, ma m olileanya ịkwụsị omume ihu abụọ. Ụgha ikpe ụgha na karịsịa mgbe ha Anụọhịa m na mmanya ọzọ na karịsịa na-agwụ ike.
Ya mere ka otutu ole na ole nkịtị okwu na-anwa ịghọta ihe mere onye ụgha ụgha.
Ọ bụrụ na ị a 5'5 Ihọd na 80% mkpirikpi inyom ga-adịghị ọbụna na-aga si na ị, ị na-ekwu na ị 5'8′ na olileanya gị amara merie ụgha. Ọ na-adịghị, ma ị na-atụ ya na-eme.
Ọ bụrụ na ị a 175 lb nwaanyị, Ị nwere ike kpọọ onwe gị 'ike na toned'. Ee, 'A ole na ole mmezi pound’ ma ọ bụ ọbụna 'nnukwu’ ga-a bit ihe ezi, ma ị-arapara n'ahụ gị nkọwa n'ihi na ọtụtụ ụmụ okorobịa na-agaghị na-anabata eziokwu. Mgbe ị na-ezute, ị na-agbalị na-eleghara na emechu ihu anya ọ na-enye gị, n'ihi na ị dịkarịa ala na-gị mma ogbugba, nri?
Ma ndị nwere ike na-ata ụta a na-eto eto-na-obi 61 afọ nwoke ma ọ bụ a okorobịa 44 afọ nwanyị maka tweaking eziokwu a tad? Ha maara na ruru ọnọdụ karịrị ha akara, ha na oyi otutu nke ndị mmadụ radars. Ya mere ha fib a nta na ma ọ bụ a otutu – ịnọgide na-anya ka ndị ọzọ online daters si n'ebe. Ana m ekwu na ọ bụ nri. M dị na-ekwu na ọ na-eme.
Site na uwa nke a na-ajụ na otu ndị kwekọrọ ekwekọ site na kọmputa tupu nzute na a ezigbo pasent nke ha ga-n'ụzọ zuru ezu forthcoming. Ọ na-eme uche. Gịnị pasent nke anyị na-erughị ala? Gịnị pasent nke anyị na-izute ibiere na ndị ọzọ’ echiche checklists? Gịnị pasent nke anyị na-smart iji mara na-eme ihe n'eziokwu 63 afọ ibu nwanyị agaghị izute ọtụtụ ndị ikom si checklists, nke bụ kpọmkwem ihe mere o ji Posts na foto site na afọ isii na iri atọ pound gara aga?
My ebe bụ na anyị kwesịrị ịmakụ ndị ụgha na ụfọdụ ụdị nke otu mmakọ, ma ọ bụ kelee ha maka idebe anyị na anyị na mkpịsị ụkwụ. Kama, anyị kwesịrị agbali ịghọta ma nakwere eziokwu ahụ bụ na nke a bụ omume na-aga ime na dị nnọọ ka Ozzy si agbarapụ ọnụ, ma ọ bụ J.Lo si agbarapụ gbara alụkwaghịm. Inweta iwe solves ihe ọ bụla na ihe niile ọ na-eme bụ ime ka ị ada ilu ma na-enweghị isi na ọdụ, abụọ àgwà na mgbe enwetatụbeghị onye ọ bụla n'ebe ọ bụla.
Ma ebe ọ bụ na anyị apụghị ịkwụsị ụgha, ebe a bụ ole na ole anya ị pụrụ na mgbalị izere ha:
1) Jụọ maka ihe osise. Amaghị m otú ọtụtụ ugboro m nwere ịhụ isi gbaa na-ele anya dị Natalie Portman, naanị ka na-achọpụta na ọ bụ Natalie Portly na ndụ n'ezie, ma amụtala m na m ihe. Ọ bụrụ na m nwere ike izipu mmezi foto nke m weere n'ime afọ ikpeazụ, mgbe ahụ, e nwere ihe enweghị ihe ngọpụ maka onye ọzọ bụghị ka ha dị ka nke ọma.
2) Tụlee àgwà nke photos. Nkiri na uwe anya dị iche iche karịa ka ọ afọ iri gara aga. Dị Iche Iche si edozi isi, dị iche iche ejiji, iche iche na agba palette. Ọ bụrụ na a na foto ọdịdị dere, onye nwere ike nke ọma na-ezo ihe.
3) Tụlee mejupụtara nke photos. N'Ezie emechi elu foto na ọ dịghị ndị ọzọ na-akwado photos? Onye bụghị obi ụtọ na ya / ya ahu. Na-ahụ naanị onye si obi elu? Otu ihe. Yi niile nwa, lie n'azụ enyi, ma ọ bụ obstructed site a nnukwu fern? Onye ahụ na-ezo, ezi ihe kpatara ya.
4) Chee echiche n'ụzọ ezi uche. Ị mgbe chọrọ imesi ahụ, ma na profaịlụ gị ma ọ bụ na ekwentị, ma ọ bụrụ na ihe anaghị tinye, detuo ya. A Ihọd onye na-akpọ onwe ya 'bibiri’ ma ọ dịghị eme ihe ọ bụla egwuregwu na-adịghị agwa unu eziokwu. Otu na nwaanyị ahụ na-azọrọ na ọ bụ 39 ma nwere ihe abụọ grandkids.
M ga-aga na ndekọ na-ekwu na ọ dị mma ka mmadụ na-edina banyere ya / ya afọ naanị ma ọ bụrụ na onye na-ekweta eziokwu mgbe e mesịrị na profaịlụ. Ịgha ụgha na-eme ka onwe gị na-egosi na ndị mmadụ arbitrarily warara search ibiere dị nnọọ mkpu si ụgha na nzube na-eduhie.
Inweta ara na ụgha bụkwa d'classe. M na-ekwu na a di na nwunye nke ụmụ okorobịa ndị mere iwe na-ụgha na ha mere embarrassingly. Otu gwara anya a nwanyị na-idet afọ atọ anya ya afọ. Ndị ọzọ tụgharịa na hapụrụ nwaanyị na-adịghị ndụ ruo ya foto. Iji m, nke a bụ ihe ọjọọ abụọ emeghị a nri. The ụgha screwed elu, ga-akwụ ụgwọ n'ihi na ọ na-agaghị enweta a abụọ ụbọchị, ma nke ahụ bụ dịghị ihe mere onya ya maka ndụ.
Ọ bụrụ na mmadụ na-eduhie gị na a foto, na-a klas omume site bụghị nanị na-eme amara, ma site inaha onwe gị. Site n'ịgwa eziokwu, i mere ihe niile dị onye nwere ike omume na-eme hichapụ dum online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha.